Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Marianne Díaz Hernández · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2017 16:24 GMT
Mpisolovava aho, mpanoratra tantara hai-famoronana (Sci-fi) ary mpikatroka zon'olombelona, teraka tao Venezoela ary monina ao Santiago, Shily. Mpikatroky ny kolontsaina malalaka ihany koa aho, niasa hoy tompon'andraikitra momba ny lalàna tao amin'ny Creative Commons ao Venezoela ihany koa aho nandritra efa-taona farany. Niaina fiainana maro isan-karazany aho nandritra ny taom-polo farany, nanomboka tamin'ny asan'ny mpisolovava amin'ny sehatry ny asa, nanao asa lehiben'ny tonian-dahatsoratra tamin'ny trano famoaham-baovao iray, ary nanangana ONG momba ny zo nomerika tao Venezoela, nitarika atrikasa momba ny famoronanana asa-soratra sy atrikasa momba ny fiarovana nomerika. Aiza ho aiza aho ankehitriny: mpikaroka momba ny politikam-bahoaka eo anelanelan'ny teknolojia sy ny zon'olombelona aho. Noho izany rehetra izany, nahita aho fa ny manampy ny olona mba haneho hevitra no talentako, izay ao anatin'ny zava-drehetra ataoko, ary mahatonga ahy ho ato amin'ny Global Voices.
Nanomboka tato amin'ny Global Voices aho tamin'ny taona 2010, hatramin'ny niandohan'ny asa an-tsitrapo nataoko (nirotsaka an-tsitrapo tao amin'ny Amnesty International sy Creative Commons nandritra ny taona maro aho). Nameno no antontan-taratasy ho mpirotsaka an-tsitrapo avy hatrany aho raha vao nahafantatra ny fisian'ny GV Advocacy (Advox), sy ny fomba fiasan'izany tetikasa izany amin'ny lohahevitra lehibe amiko indrindra: ireo fandrahonana marobe sy isan-karazany mahazo ny fanehoan-kevitra antserasera manerana izao tontolo izao. Nanomboka tamin'izany, niasa ho mpanoratra tao amin'ny Advox sy ny tranonkala fototry ny GV, mpandika lahatsoratra tao amin'ny ekipa Lingua Espaniola ary nandray anjara tamin'ny tetikasa isan-karazany (ny tetikasa tena niraketan'ny foko dia ny tetikasa mahafinaritra GVeX). Saingy ao anatiko ihany koa ny Advox ary mandray anjara betsaka amin'izany aho. Maro amin'ny zavatra ataoko no vaovao momba ny fandrahonana sy ny herisetra mihatra amin'ny fahalalahan'ny aterineto ao Venezoela; zavatra izay tena hireharehako ny fitaterana mahatalanjona nataon'ny ekipantsika mahafinaritra nandritra ny fihetsiketsehana taona 2014 tao amin'ny firenena.
Tao anatiny fito taona farany izao dia trano (tanindrazana) ho ahy ny Global Voices, fianakaviana (fianakaviana iray mieli-patrana manerana ny vazantany efatr'izao tontolo izao) sady toerana ahafahan'ny zavatra ataoko hanova zavatra. Te-hanompo amin'ny maha solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo aho mba hanohizan'ity fikambanana ity ho toerana azo antoka sy manabe voho ny fahalalantsika tahaka izay efa nataony tamiko.